Ny anaram-boninahitra hoe Renin'Andriamanitra dia anarana omen'ny Katôlika sy ny Ôrtôdôksa an' i Maria renin' i Jesoa. Izany anarana izany dia notapahin' ny konsily tao Efeso (na Efesosy na Efezy) tamin' ny taona 431 nefa i Aleksandra avy any Aleksandria no nampiasa azy voalohany tamin' ny taona 325. Amin' ny fiteny grika dia ny hoe Θεοτόκος / Theotokos ("niteraka an' Andriamanitra") no dikan' io teny io. Noho i Maria niteraka an' i Jesoa (na Jesosy) izay inoan' izy ireo fa sady olona no Andriamanitra no mahatonga izany. Raha sady olona tokoa no Andriamanitra tokoa i Jesoa dia sady niteraka olona tokoa no niteraka Andriamanitra tokoa i Maria niteraka azy, hoy ny Katôlika sy ny Ôrtôdôksa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Renin%27Andriamanitra&oldid=1010929"
Voaova farany tamin'ny 18 Aprily 2021 amin'ny 07:46 ity pejy ity.